Publié avril 25, 2019 par Book News
Nanomboka omaly teny amin’ny tokotaniben’ny Lapan’ny Tanàna Analakely ny hetsika “Little Garden & Green Energy”, izay mikasika ny angovo azo havaozina sy ny tontolo maitso. Andiany fahadimy ity hetsika ity ary niavaka tamin’ireo andiany teo aloha izy ity. Nomena lanja manokana ny tontolo maitso.
“Little Garden & Green Energy”: ny tontolo maitso no omen-danja
Notanterahina nanomboka omaly ary tsy hifarana raha tsy rahampitso 26 Aprily 2019 ny hetsika « Little Garden & Green Energy ». Hetsika izay atao eny amin’ny Parvis Analakely.
Mpitsidika mihoatra ny 3 500 no andrasana amin’izany. Miisa 65 kosa ireo trano heva mandray anjara, izay ahitana Orinasa momban’ny Angovo azo havaozina sy mpisehatra eo amin’ny tontolo maitso.
“Fotoana iray io anomezan-danja ny tontolo maitso eto Madagasikara sy ahafahan’ireo mpisehrata amin’izany sehatra izany: mpamboly voninkazo, mpamboly sy mpitantana toeram-pambolena, mpandrafitra tontolo maitso na “paysagistes”, mpanaingo toerana, hampiseho ny vokatr’izy ireo amin’ireo olona toa azy, mpankafy ny natiora”. Izay no hita ao anatin’ny taratasy fampahafantarana ny hetsika.
Tanjona amin’ity hetsika ity mantsy ny fanentanana ny olona amin’ny resaka fambolena sy hampiasa ny angovo mazo havaozina, entina hatrany hanamaitso ny tontolo.
Green Energy: amporisihana ny olona hampiasa ireo angovo azo havaozina
Anisan’ny mampiavaka ity andiany faha dimy ity ny fisian’ny « Green Energy », izay ahitana orinasa momban’ny angovo azo havaozina. Ity farany izay mifameno amin’ny tontolo maitso hatrany. Ny fanorenana tontolo maitso no tanjona, ka misy ny pôle « énergie renouvelable & eco construction izay mampiavaka ity andiany ity tamin’ireo andiany teo aloha.
Ahitana vokatra mahakasika ny angovo azo avy amin’ny masoandro, ny rivotra, na koa ny “biomasse” eny an-toerana. Ho fanorenana ny tontolo maitso dia amporisihana ny olona hanjifa ireny vokatra ireny satria mitondra voka-tsoa tokoa eo amin’ny tontolo iainana izy ireny, sy eo amin’ny fiainan’ny olombelona andavanandro: tsy mandoto, azo avy amin’ny angovo voajanahary, tsy vita tamina akora simika, hany ka mahasalama kokoa.
Hetsika “Little Garden & Green Energy”
Maro ireo vokatra azo nandritra ireo andiany nifanesy teo aloha toy ny fisian’ny mpandray anjara vaovao mitondra vokatra vaovao foana isaky ny hetsika. Ankoatra izay dia ambohim-pihaonan’ny mpitsidika ny hetsika toa itony satria ahafahany manjifa ireo tolotra ilainy.
Tsara ny manamarika fa hisy andiany roa ny foara « Little Garden & Green Energy » amin’ity taona ity. Aorian’izao andiany fahadimy izao dia hotanterahina amin’ny volana novambra 2019 ny andiany fahaenina.